ကွင်းပြောင်းကစားမယ့် ဘာဆာ ၊ ပစ်မှတ်သစ်အတွက် ခြေလှမ်းစလိုက်တဲ့ စပါး ၊ ဒီမာရီယာ ကို ဝင်လုတဲ့ နည်းပြတိဗက် တို့နဲ့ . . . နေ့လည်ခင်း တဖြတ် နောက်ဆုံးရသတင်းများ - xyznews.co
ကွင်းပြောင်းကစားမယ့် ဘာဆာ ၊ ပစ်မှတ်သစ်အတွက် ခြေလှမ်းစလိုက်တဲ့ စပါး ၊ ဒီမာရီယာ ကို ဝင်လုတဲ့ နည်းပြတိဗက် တို့နဲ့ . . . နေ့လည်ခင်း တဖြတ် နောက်ဆုံးရသတင်းများ
ဘာစီလိုနာ အသင်းဟာ ဖရန်ကီ ဒီယွန် ကို ခပ်မြန်မြန် ရောင်းချလိုပေမယ့် လာလီဂါ ရဲ့ ဘဏ္ဍာရေး စည်းမျဉ်းတွေ ၊ လုပ်ခ လစာ စည်းမျဉ်းတွေကြောင့် အကြပ်တွေ့ နေပြီး သတ်မှတ် ထားတဲ့ ဈေးကို လျော့ချ ပေးဖို့ မဖြစ်နိုင် သလောက် ရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ ဟာ နောက်ခံလူတွေ ဖြစ်တဲ့ ဆင်မြူရယ် အမ်တီတီ ၊ ကလီမန့် လန်းလတ် တို့ကိုလည်း ရောင်းထုတ်ဖို့ စိတ်ကူး ရှိနေပြီး သူတို့ ၂ ယောက်စလုံး ရောင်းထွက်မှသာ ဆီဗီးလား နောက်ခံလူ ဂျူးလ် ကွန်ဒေး ကို ကမ်းလှမ်းမှု ပြုလုပ် နိုင်မှာလို့ သိရပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ ဟာ လာမယ့် ၂၀၂၃-၂၄ ရာသီမှာ သူတို့ရဲ့ နူးကမ့် ကွင်းကြီးကို အသစ်ပြန်လည် ပြုပြင် မွမ်းမံမှု စတင်မှာ ဖြစ်တာကြောင့် အသင်းရဲ့ ပွဲစဉ်တွေကို ကစားဖို့ အိုလံပစ် ကစားကွင်း ကို ငှားရမ်း အသုံးပြု သွားမယ်လို့ ယမန်နေ့ က သတင်း ထွက်လာခဲ့ ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး နဲ့ သတင်း ထွက်နေတဲ့ မန်စီးတီး တောင်ပံ ကစားသမား စတာလင် အနေနဲ့ လန်ဒန် ကလပ်မှာ စီးတီး ထက် ပွဲကစားခွင့် ပိုမို ရရှိဖို့ အာမခံချက် မရှိနိုင်ဘဲ ချဲလ်ဆီး ကို ပြောင်းပါက မန်စီးတီး မှာလို ဖလား ပုံမှန် ရရှိမှာ မဟုတ်နိုင်ကြောင်း ဂျေမီ အိုဟားရား က သတိပေး ပြောဆို သွားခဲ့ပါတယ် ။
စတာလင် ဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ ဂျာမေကာ နိုင်ငံကို သွားရောက် အပန်းဖြေနေပြီး လာမယ့် ၂ ပတ် အတွင်းမှာ သူ့ရဲ့ အနာဂါတ် ကို ဆုံးဖြတ်သွားဖို့ ရှိနေတယ် လို့လည်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
ဖူလ်ဟမ် အသင်းဟာ လီဗာပူး လူငယ် နောက်ခံလူ နီကို ဝီလ်ယံ အတွက် ပေါင် ၁၀ သန်း နဲ့ ကမ်းလှမ်းဖို့ ပြင်ဆင် နေတယ်လို့လည်း သိရှိရ ပါတယ် ။
နွေရာသီမှာ ကစားသမားသစ်တွေကို ခပ်သွက်သွက် ခေါ်ယူ နေတဲ့ တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး ဟာ မစ်ဒယ်ဘရော့ နောက်ခံလူ ဒီဂျတ် စပန်စ့် ကို ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ ဆွေးနွေး ပြောဆို နေပြီလို့ သိရပါတယ် ။
၂၁ နှစ် အရွယ် အင်္ဂလန် လူငယ် နောက်တန်း ကစားသမားလေး ဟာ မနှစ်တုန်းက နော်တင်ဟမ် ဖောရက်စ် မှာ အငှားထွက် ကစားပြီး ပုံစံကောင်း ပြသနိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ် ။
မစ်ဒယ်ဘရော့ ကတော့ အနည်းဆုံး ပေါင် ၁၅ သန်း အလိုရှိနေပြီး အပိုဆုကြေးတွေလည်း ထည့်သွင်း ချုပ်ဆို လိုတယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
ဖီအိုရင်တီးနား အသင်းဟာ ရီးရဲမက်ဒရစ် တိုက်စစ်မှူး လူကာ ဂျိုဗစ် ကို အငှားနဲ့ ခေါ်ယူ လိုပေမယ့် လုပ်ခ လစာ များပြားလွန်းတာကြောင့် ရီးရဲ ဘက်က ဂျိုဗစ် ရဲ့ လစာ ကို ၅၀% အထိ ကူညီ ပေးချေပေးဖို့ ညှိနှိုင်း တောင်းဆို နေတယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
နယူးကာဆယ် နဲ့ ဘန်လေ တို့ ကတော့ ဂိုးသမား နစ်ပုပ် ရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ အတွက် စာရွက် စာတမ်းတွေ ပြုလုပ် နေပြီး ဒီအပတ် အကုန်လောက်မှာ ကြေညာနိုင်ဖွယ် ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
မာနေး နဲ့ အေးဂျင့် တဦးတည်း အတူ ဖြစ်တဲ့ ကိုနတ် လီမာ ကို ဘိုင်ယန်မြုးနစ် က ခေါ်ယူဖို့ ဆက်လက် ကြိုးစား နေတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ကိုနတ် လီမာ ရဲ့ ကလပ် လိုက်ပ်ဇစ် ကတော့ သူတို့ ကစားသမား ကို လက်မလွှတ် လိုဘဲ စာချုပ်သစ် ချုပ်ဆို ပြီးမှ ပိုမို မြင့်မားတဲ့ ဈေးနဲ့ ရောင်းချသွားလိုတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
စပိန် အခြေစိုက် မာကာ သတင်းစာ က မန်ယူနိုက်တက် တိုက်စစ်မှူးကြီး ကာဗာနီ ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီ တုန်းက ဗယ်လက်ကာနို အသင်းကို လာရောက် ကစားဖို့ ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်လို့ ဖွင့်ဟ ဖော်ပြ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
တူရကီ မှာ နည်းပြ လုပ်နေတဲ့ ယူဗင်တပ် ကွင်းလယ် နဲ့ နည်းပြဟောင်း ပီယာလို ဟာ ဝေးလ် ကွင်းလယ်လူ အာရွန်ရမ်ဆေး ကို ယူဗင်တပ် ကနေ ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ကူး ရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
ယူဗင်တပ် ကို ပြောင်းရွှေ့ လာမယ့် ပေါလ် ပေါ့ဘာ ဟာလည်း မျှော်မှန်း ထားတဲ့ အချိန်ထက် စောပြီး တူရင် ကို လာရောက်မယ်လို့ သိရပါတယ် ။
ပေါ်တို ကနေ ရိုးမား တို့ အငှားနဲ့ ခေါ်ယူထားတဲ့ ကွင်းလယ်လူ ဆာဂျီယို အိုလီဗီယာရာ ကို ဖီနာဘာချီ အသင်းက စောင့်ကြည့် နေပြီး ရိုးမား ဘက်က အပြီးသတ် မဝယ်ယူဖြစ် ပါက ဝင်ရောက် ကမ်းလှမ်း သွားဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
အာဂျင်တီးနား ကလပ် ရိုဆာရီနို စင်ထရယ် ရဲ့ နည်းပြသစ် ဖြစ်လာတဲ့ ကားလိုစ့် တိဗက် ဟာ အသင်းဟောင်း ယူဗင်တပ် က ခေါ်ယူဖို့ ကြိုးစား နေတဲ့ အာဂျင်တီးနား ဝါရင့် ကစားသမားကြီး ဒီမာရီယာ ကို ကမ်းလှမ်းဖု့ိ ပြင်ဆင် နေတယ်လို့လည်း သတင်း ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ခင်ဗျာ . . . ။
Previous Article မိုနာကို ကို ပြောင်းရွှေ့တော့မယ့် လီဗာပူး က ဂျပန် ဆာမူရိုင်း
Next Article Weekly Special: ပြောင်းလဲလာတဲ့ အာဂျင်တီးနား လက်ရွေးစင်အသင်း ကစားပုံကို သုံးသပ်ခြင်း